Home Somali News Somaliland: Gudoomiye Muuse Biixi iyo Gudoomiye Cirro Oo Weedho Kulul Isku Dhaafsaday...
Guddoomiyayaasha xisbiyada KULMIYE iyo WADDANI – Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) – ayaa fagaare la buuxo isku waydaarsaday weedho weerar iyo weerar-celis ah oo la xidhiidha burburkii ku yimi heshiis saddexda xisbi qaran ka gaadheen muddo-kordhin cusub oo ka duwan sannadkii Komishanku sheegeen inay doorashooyinka Madaxtooyada iyo Wakiillada ku qaban karaan, kaas oo markii dambe hoggaamiyayaasha xisbal-xaakimka iyo UCID u gudbiyeen Guurtida Sabtidii.
Labada masuul oo ka wada qaybgalay xaflad loo sameeyey furitaanka xarunta guud ee telefishanka madaxbannaan ee STAR oo lagu qabtay hudheelka Maansoor ee magaalada Hargeysa shalay, taasi oo uu goob-joog ka ahaa weriye ka tirsan Jamhuuriya waxay isku ganeen weedho siyaasadeed oo isugu jira kuwa kulul iyo qaar kaftan duurxul ah oo midba ka kale ku liishaamay.
Guddoomiyaha xisbiga muxaafadka ee KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi oo isagu ku horreeyey hadalka, ayaa ku eedeeyey Guddoomiyaha WADDANI masuuliyadda burburkii heshiiska saddexda xisbi qaran ka gaadheen muddo-kordhinta oo uu sheegay inay xisbal-xaakin ahaan tanaasul badan ka sameeyeen, isla markaana masuuliyad iyo culays isku saareen sidii xaaladda taagan loogu dhammayn lahaa hab-dhaqankii Somaliland ku soo caano-maashay ee ku salaysnaa isu-tanaasulka, balse tallaabadii Guddoomiye Cirro qaaday wiiqayso ujeeddadii loo socday, isagoo ugu baaqay xisbiga WADDANI inuu daweeyo khaladka uu sameeyey.
“Maanta waxa ina haysa xummadda dib-u-dhaca doorashooyinka. Waa arrin qaran oo way ina saamaynaysaa. Waad ogaydeen oo warbaahinta waannu ka hadalnay qoladayada axsaabtu shalay (Sabtidii), waxana nagu dhacay arrin aanaan filayn. Saddexda xisbi waannu soo heshiinnay, qaranku inuu heshiiyo ayaana wanaagsan. Waxa inoo dhaqan ahayd in wax walba aynnu kaga gudubno midnimo. Had iyo jeer cidda talada haysa ayaa farta lagu fiiqaa oo wax la cararta. Waxaannu is leenahay waxaannu ku dadaalnay in aannu u soo fadhiisanno qolada mucaaradka oo weliba siday ku taliyeen aannu yeelno. Markii shirka aannu fadhinay ragga culayska dhabarka loo saaray aan kow ka ahaa, iyadoo la igu yidhi, orod oo go’aankaa xukuumaddaada ka soo fuli. Waxa la ii diray qolo dawlad ah oo kuraastooda ku fadhida oo waqti badan naawilisay ayey labadaa guddoomiye ee aannu saaxiibbada nahay iyagu yidhaahdeen ka soo gaabi oo halkaa keen. Ilaahay wuu igu soo guuleeyey. Maan filayn in qoladu mucaaradku ka baxdo. Dhantaalka innagu dhacay waxa laga yaabaa inuu inala jiitamo oo uu dhibaato inoo keeno.
Waxaan leeyahay xisbiga WADDANI oo guddoomiyihiisii i soo horfadhiyo oo aanaan is xamanayn, walaalayaal haddii aynnu heshiinnay, haddii aynu midowno nidhi, haddii sidii inoo dhaqanka ahayd xaalad walba marxaladdaa aynnu kaga baxno nidhi, markaad goonni uga baxdo wixii la isku ogaa xumaan baa ka imanaysa, xumaanna uma baahnin. Waxaan ku dardaarayaa taasi dhacdaye daawadeedii ayaa la idinka rabaa. Waxaynnu hubnaa in labada maalmood ee soo socda Guurtidu go’aan gaadhi doonto. Anigu waxaan ku dardaarayaa hadday cabasho timaad in aynnu si habboon oo nabadgalyo ah u kala cabanno.”
Waxa kaloo Biixi sheegay in aanay ka aqbalayn Cirro inuu nabadgalyada waxyeelleeyo, waxaannu ugu baaqay inay cabashadooda u maraan hab nabadgalyo ah, “Ku dhali mayso, iskuna gacan-garoojin mayno waxaan samaynayaa buuq iyo fawdo oo aan ku abaabulayaa dadka Cabdiraxmaanow yeeli maynno. Nabad baannu doonaynaa, ma doonayno in carruurtayadu dugsiyada tagi waayaan ama aad mudaharaad geliso, adigoo kuwaagii Finland joogaan, kuwaygu halkan ayey ku dhigtaan (waxbarashada) oo ma doonayo wax ka khalkhalgeliya.
Sidaa darteed waxaannu ugu baaqaynaa ninkii cabanayaa nabadgalyo ha ku cawdo, qoorta ayaannu soo dhiganaynaa. Madaxweynaha iyo dawlad wax kala cabanaysa horeynnu u dhammaynay, haddana diyaar baannu u nahay wax kastoo khaldama inaynnu nabadgalyo iyo wanaag ku dhammaynno. Waxaad adigu noo dooratay, ummadduna u dooratay xukuumadda inay nabadgalyada ilaaliso, sidaa darteed, waayeelnimo yaan lagaa waayin nin oday ah baad tahaye (Cabdiraxmaan Cirro),” ayuu hadalkiisa ku soo xidhay Guddoomiyaha Xisbul-xaakimka KULMIYE.
Haseyeeshee, Guddoomiyaha xisbiga WADDANI Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), ayaa eedaynta Muuse Biixi ka bixiyey jawaab duurxul siyaasadeed ah, inkastoo uu soo dhaweeyey baaqiisa, waxaannu yidhi, “Muuse waxaannu ka wada baxnay Kulliyadda Nabadda ee Jaamacadda Hargeysa oo berigii hore wixii laga sheegi jirayba imminka waa nin nabadeed maanta sidaan filayo, dardaarankiisa odaynimana wuu ku mahadsan yahay. Waa run oo saddexdayada xisbi hawl baannu wada galnay. Waxay noogu muuqatay uun hawshii aannu doonaynay in aanay noqon mid aannu wada fulin karayno, sidaa daraadeed ayey hawshii shalay (Sabtidii) u dhacday, wax badanna kaga noqon maayo.”
“Horta oday Muuse wixii uu samayn jiray shalay yaanay la fool-xumaanin maanta, waxay ila tahay annaga qoladayada WADDANI aad looga baqan maayo, nabaddana looga baqan maayo, laakiin dareenkayaga in aannu muujinno xaq baannu u leenahay, nabaddana waannu ilaalin doonnaa,” ayuu yidhi Md. Cabdiraxmaan Cirro.